उच्च पदमा आसीनहरुले धुर्मुस सुन्तलीबाट सिकून् - Ratopati
उच्च पदमा आसीनहरुले धुर्मुस सुन्तलीबाट सिकून्
२०७२ सालमा वैशाख १२ गते महाभूकम्प गएको थियो । महाभूकम्प गएको ठ्याक्कै २ वर्ष पुग्यो । यसले १४ वटा जिल्लाका भौतिक संरचना धेरैजसो ध्वस्त भएका थिए । हजारौँ मान्छेहरु मरे, हजारौँ बेपत्ता, हजारौँ घाइते, अपाङ्ग, हजारौँ घरबारविहीन र टुहुरा भए ।
मर्ने त मरेर गए, बाँच्नेको जिन्दगी ज्यादै कष्टकर बन्न पुगेको छ । खानलाई खाना छैन, बस्नलाई बाँस छैन । अझै पनि धेरै भूकम्पपीडितहरुको विजोग भयो ।
महाभूकम्पपछि यो २ वर्षमा ३ फरक अनुहार देखापरिसका छन् । फरक पार्टी, फरक सिद्धान्तका मान्छे प्रधानमन्त्री भए । राष्ट्रपति फेरिए । उपराष्ट्रपति फेरिए । दर्जनौँ दर्जनौँ मन्त्री फेरिए । सचिव फेरिए, कर्मचारी फेरिए ।
यिनै भूकम्पपीडितका नाममा चीन भ्रमण गरे, भारत भ्रमण गरे, तलबभत्ता बढाए, चिल्ला गाडीहरु फेरे । मिटिङ गर्न पाँच तारे होटलहरुमा गए । तर विडम्बना, ढलेको धरहरा उठेन, गरिबको छाप्रो उठेन, भोकानाङ्गाको पेट भरिएन । भत्केको विद्यालय, अस्पताल, बाटोघाटो बनेन् ।
अझैपनि सिन्धुपाल्चोकका गाउँतिर खाना नपाएर केटाकेटी, वृद्धवृद्धा मरिरहेछन् । गोरखाको गाउँतिर जाडोले कठिङ्ग्रिएर धेरै भूकम्पपीडितहरुले ज्यान गुमाइरहेका छन् । दोलखाको गाउँतिर औषधोपचार नपाएर बिरामी, सुत्केरीहरु मरिरहको छन् ।
मुलुक दक्षिण एसियाको दोस्रो गरिब मुलुक भइसकेको छ । काठमाडौँमा सास फेर्नका लागि वायु प्रदूषण भएको अध्ययनले देखाइसकेको छ । तर पनि यो देशको काटो खानेहरु अझै पनि सुकिला मञ्चमा उभिएर उद्घोष गर्दैछन्– “यो देश बनाउने जिम्मा म र मेरो पार्टीको हो । यो देश म र मेरो पार्टीबाहेक अरुले बनाउँदैन । मलाई भोट देऊ, यो देशलाई म सिङ्गापुर बनाउँछु ।” यस्ता भाषाण छाँट्न तर सिन्को नभाँच्नेहरुलाई धिक्कार छ । यस्ता नालायकहरु अनुहारलाई घृणा गर्छु ।
यो गर्छु, त्यो गर्छु, भनेर घोक्रो सुकाएर कहिल्यै नथाक्ने महासयहरु देश र जनताको यस्तो हालत हुनेसम्म कसको बाउको टाउको कन्याइरहेका छौ । जवाफ छ ?
चाइनासँग मतपेटिका मागेर औँलामा लगाउने मसिधरि भारतसँग मागेर चुनाव गरेर यो देश कायपलट गराउँछु भन्दै भुक्ने नेतृत्वकर्ताहरु तिमीहरु चोली र फरिया लगाएर सडकमा नाचेर हिँडे हुन्छ । तिमीहरुमा औकात थाहा भइसक्यो ।
देश बनाउने ठेक्का पाएका ठेकेदारहरु, वरिष्ठ हाकिमहरु, देशको ढुकुटी रित्याएर आफ्नो पोल्टो भर्नमा व्यस्त छन् । महाभूकम्प गएको २ वर्ष बित्दा २ वटा इँट्टा ठडाएका छैनन् । देश बनाउने कुनै मतलव छैन। गरिब निमुखाको कुनै चासो छैन ।
धुर्मुस सुन्तलीको योगदान
लाखौँ रकम तलब भत्ता खाएर २ वर्षसम्म सिन्को नभाँचेका उच्च पदमा आसीनहरुले देशको हड्डी चुस्ने अनि धुर्मुस सुन्तलीले चाहिँ दुनियासँग हारगुहार गरेर रातारात खटेर ३ महिनामा ५०–६० घर बनाएर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उदाहरणीय काम गरेका छन् । राजनीतिको नाममा एउटै दाजुभाइ फुटाउने, जाति, वर्ग, धर्म अलगाउने, नरपिसाचहरुको हैकम चलेको बेला धुर्मुस सुन्तलीलाई हिमाल, पहाड र तराई तीनै क्षेत्रमा बस्ती बनाउने चिन्ता छ ।
भ्रष्टचारी जेलबाट निस्कँदा ६० किलोको मालाले स्वागत गर्छन । ज्यानमुद्दा केसमा अदालतले मोस्ट वान्टेड सूचीमा राखेको अपराधिलाई नागरिकले अभिनन्दनसहित सम्मान गर्छन् । चोर, फटाहा, गुण्डा, अपराधी, नैतिकताहीन, गैरजिम्मेवारहरुले देश सञ्चादलन गरेको छन् भन्ने देखिन्छ ।
रात दिन खटेर घरबारविहीन गरिब निमुखाको बस्ती बनाउँदै हिँड्ने, दिनदुःखीको आँशु पुछ्दै हिँड्ने धुर्मुस सुन्तलीबाट राज्यको उच्च पद ओगट्नेहरुले आफ्नो कतव्य र जिम्मेवारीको बोध गर्नुपछ ।
म भूकम्पपीडितको घरमा राष्ट्रपतिलाई निम्तो
भ्रमण खल्लो महसुस भएन राष्ट्रपतिज्यू ?
ब्लगः कम्ब्याटले जोडेको मित्रता
आत्मनिर्भर बन्दैछन् गाउँका महिला
राष्ट्रपतिज्यूको भनाइसँग सहमत हुन सकिएन
ब्लग :अपाङ्गताको आरक्षणमा समस्या
कसले सुन्ने नागरिकका पीडा ?
काठमाडौंको धूलो र हाम्रो व्यवस्थापन